ဗေဒင် – Page6– PwintsSan
လက် (၄) မျိုး အကြောင်း သိပြီးပြီလား သင်ရော ဘယ်လက်အမျိုးစားထဲပါသလဲ
သင့်လက်အမျိုးစားကိုသိရင် ဘယ်လိုဟောထားလဲဖတ်ကြည့်လိုက်နော် စတုရန်းပုံ သဏ္ဍာန် လက်ဖဝါး နဲ့ ထောင့်မှန် စတုဂံ ပုံသဏ္ဍာန် လက်ဖဝါး ဆိုပြီး (၂) မျိုး ရှိပါတယ်။ လက်ချောင်း တွေဆိုရင်လည်း တိုတာနဲ့ ရှည်တာဆိုပြီး (၂) မျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီ (၂) မျိုးစီကို တွဲဖက်ကြည့်လိုက်ရင် […]
အင်္ဂါ သားသမီး​​လေး​တွေ အ​ကြောင်း
အင်္ဂါတွေဟာ အပြင်ပန်း သဏ္ဍန် တည်ငြိမ် အေးဆေးစွာနဲ့ နေတတ်ကြပေမဲ့ အင်မတန်မှ ဒေါသကြီးတဲ့ နေ့နာမ်တွေ ဖြစ်ကြတယ်… မဟုတ်ရင် မခံချင်ကြဘူး။ ဒေါသဖြစ်ရင် အပြင်မှာ ပေါက်ကွဲကြတာထက် ပါးစပ်က ပူညံပူညံနဲ့ ရေရွတ်နေ တတ်ကြတယ်… လူတွေအပေါ် ဖော်ရွေစွာနဲ့ ခင်မင်တတ်ပါတယ်… ဝတ္တရား ပျက်ကွက်မိ ရင်လည်း […]
1. မိမိဝင်ငွေ မည်မျှပင် နည်းပါးပါစေ 10ပုံ 2ပုံကို လှူပါ။ ရရှိလာသော ဝင်ငွေမှ ဖယ်ထား၍ မြတ်စွာဘုရားကို ဖယောင်းတိုင် တစ်ထုတ်ဖြစ်စေ. ပန်းတစ်စည်း ဖြစ်စေ လှူပါ။ မိဘများသက်ရှိထင်ရှားရှိလျင် မိဘများကိုလည်း လှူပါ 2. ဘာသာရေးအတွက် အချိန်ပေးပါ။ မည်မျှပင် အလုပ်ရူပ်သည် ဖြစ်စေ. […]
လူသေလျှင် လူမှာစောင့်တဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ် သေပါသလား
April 21, 2018 twl 0
လူသေလျှင် လူမှာစောင့်တဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ် သေပါသလားဘုရား =============== လူအများစုတို့သည် နတ်ကိုးကွယ်ကြသည်၊ ယုံကြည်ကြသည်၊ အားထားကြသည်၊ နတ်နှင့်ပတ်သက်၍ကား သိသူ လေ့လာသူ အတော်နည်းပါးလှပါသည်။ ပြောသံကြားနှင့် အရမ်းယုံ၊ အရမ်းကိုးကွယ်သူသာများပါသည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းသူကား နည်းပါးပါသည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းသူများရှိ၍ မေးမြန်းသဖြင့် ပြောပြသောအခါမှ “သြော်…ဒီလိုလည်းရှိပါသေးလား” ဟု အချို့က လက်ခံ၍ […]
(၁) စူဠာမဏိစေတီတော်၊(၂) ဒုဿစေတီတော်၊(၃) မဟေသရစေတီတော် တို့ဖြစ်ကြတယ်။ (၁) စူဠာမဏိစေတီတော်ဆိုတာတာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာသိကြားမင်းတည်ထားတဲ့စေတီဖြစ်တယ်။ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားဟာကဏ္ဍကမြင်းကိုစီးပြီးမောင်ဆန်နှင့် အတူတောထွက်ကြရာမှာအနော်မာမြစ်ကိုရောက်သောအခါကဏ္ဍကမြင်းနှင့်မောင်ဆန်ကိုပြန်လွှ တ်၍အလောင်းတော်သည်ဆံတော်ကိုဖြတ်ပြီးသော်” ငါသည် …..အကယ်စင်စစ်ဘုရားဖြစ်မည်ဆိုပါကဤ ဆံတော်သည်ကောင်းကင်၌ ….တည်စေသတည်း၊အကယ်၍ ….ဘုရားမဖြစ်ပါကမြေ၌ကျစေသတည်း ” ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြု၍ကောင်းကင်သို့….မြှောက်ပစ်လိုက်ရာမကိုဋ်နှင့် ….တကွသော ဆံထုံးတော်သည်အထက်သို့….တစ်ယူဇနာတိုင်တိုင် တက်၍ကောင်းကင်၌တည်၏။ ထိုအခါ….သိကြားမင်းသည်ဆံတော်ကိုမြင်၍ရတနာ ပန်းတောင်းဖြင့်ခံယူပြီးလျှင်မိမိနေရာတာဝတိံသာနတ်ပြည်၌စူဠာမဏိစေတီတော်ကိုတည်ထားကိုးကွယ်လေ၏။ […]
အမှန်တရားကို ပြောရင် လူတိုင်း လက်မခံချင် ကြပါဘူး – စနေ ဆိုသည်မှာ စိတ်ကြီးတယ် …. – ဒေါသဖြစ်လာရင် ဘယ်သူကိုမှ ဘယ်အရာကိုမှ ထည့် မစဉ်းစားဘူး ထည့်လဲ မတွက်တတ်ဘူး – ဒါပေမဲ့ ပြောပီး လုပ်ပီး သွားလို့ သူမှားနေတဲ့ ကိစ္စကိုလဲ […]